२४ घण्टामा श्रीमानको मृत्यु हुनेपक्का थियो, श्रीमतीले भनिन कि म बच्चा चाहन्छु, त्यस्तो कुरा सुनेर सबै जना छक्क परे! – List Khabar
Home / रोचक / २४ घण्टामा श्रीमानको मृत्यु हुनेपक्का थियो, श्रीमतीले भनिन कि म बच्चा चाहन्छु, त्यस्तो कुरा सुनेर सबै जना छक्क परे!
admin November 27, 2021 रोचक Leaveacomment 107 Views
विवाह पछि एक महिलाको लागि उनको पति सबै कुरा हो। उनी आफ्नी सुन्दर जीवन उहाँसँगै बिताउने र परिवारलाई अगाडि बढाउने सपना देख्छिन्। तर कहिलेकाँही यस्तो दु: ख पनि आउँछ जब पति बच्चा जन्माउन अघि नै मर्दछ। गुजरातको बडोदरामा एउटी आइमाईलाई पनि त्यस्तै भएको छ।
पतिलाई उपचारका लागि मे १० मा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर उसको अवस्था खराब हुन थाले। उनले दुई महिनासम्म जीवन र मृत्युको लागि स .्घर्ष गरे। उसको फोक्सोले काम गर्न छोडीसकेको थियो। डाक्टरहरूले आइमाईलाई भने कि तपाईको लोग्नेमान्छे तीन दिन मात्र छ। यस्तो अवस्थामा, महिला डाक्टरहरूको अगाडि एउटा अनौंठो मांग राखिन्। उनले भनिन् कि उनी आफ्नो लोग्नेको शुक्राणु चाहान्छिन् ताकि भविष्यमा उनले बच्चा जन्माउन सकून्। यो उनको पतिको अन्तिम चिन्ह हुनेछ।
डाक्टरहरूले महिलाको प्रेमप्रति सम्मान व्यक्त गरे र भने कि मेडिकलको कानूनी ऐन अनुसार पतिको अनुमोदन बिना शुक्राणु नमूना लिन सकिदैन। यस्तो अवस्थामा, उक्त महिला गुजरात हाईकोर्टमा मुद्दा हाल्न गई। महिलाको पतिसँग यो सबै गर्न केवल २४ घण्टा बाँकी थियो। उक्त महिलाले सोमबार साँझ हाईकोर्टमा निवेदन दिएका थिए र दोस्रो दिन तत्काल सुनुवाईको लागि अनुरोध गरेकी थिई। यस पछि, जब यो कुरा उच्च अदालतको दुई सदस्यीय पीठ समक्ष आयो, तिनीहरू पनि छक्क परे, यद्यपि छक्क परे तिनीहरूले मात्र 15 मिनेटमा उक्त महिलाको हितमा फैसला दिए।
Previous अमेरिकामा बस्ने युबक भनेपछी नेपाली सेलिब्रिटी हुरुक्कै, गायिकापछी नायिकाले पनि अमेरिका बस्ने युबकसंग बिहे गर्दै
Next भाउजूले गरिन आफ्नै देवरको हत्या : शव आधाअवस्थामा फेला जलेको